Ukunyamekelwa kweentlanzi | Ngeentlanzi
El iintlanzi zesalar okanye kwaziwa njenge Ingelosi yentlanzi Le yenye yezona ntlobo zidumileyo zetropiki yee-aquariums. Imibala yabo ebabazekayo ibenza babange ukuba bayinika uvuyo kunye nombala. Olona phawu luphambili ngokubhekisele kukhathalelo kukuba baziintlanzi ezihlala emanzini ashushu kwaye kufuneka sihlale sigcina ubushushu obufanelekileyo kunye neemeko ezifanelekileyo kuba zihlala zihlala ukusuka kwi-7 ukuya kwi-9 iminyaka.
Ekuqaleni bevela kwiAmazon bahlala kwilali, imibala yesilivere phantse yeemilo eziphaziliweyo ezinamaqela athe nkqo Umnyama, ubonelela ngokufihla okugqibeleleyo kwezinye iintlobo, kodwa ukusukela kwinkulungwane yamashumi amabini ekuqaleni iindidi ezintle kakhulu ziye zaveliswa emva kokuzala ekuthinjweni.
Ngenxa yokuba Isikali silinganisela ukuya kwi-25 cmKuba banamaphiko amabini acekeceke kakhulu kwaye amade asemaphandleni kwaye iseti yamaphiko iphindwe kabini okanye kathathu ukuphakama komzimba, bafuna i-aquarium enkulu. Izinto zokuhombisa ezinje ngezityalo ziyacetyiswa, kodwa zihlala zisemacaleni nasemva kwe-aquarium kwaye ngenxa yoko zishiya indawo enkulu yasimahla yokuba iintlanzi zidade ngokukhululekileyo kwaye ngaphandle kwengxaki zesithuba.
Ukukhankanywa okhethekileyo ngokubhekisele kubushushu bamanzi, i I-scalar fish ifuna ukuba nobushushu kwi-24 degrees. Ukuba sifuna ukufaka isifudumezi, siya kuyenza kunye neshushu, ukulawula ubushushu bamanzi. Njengoko bengabosapho lwecichlid, ke ngoko bafuna amanzi angathathi cala, ene-pH phakathi kwe-6 kunye ne-7,2 kwaye ithambe kancinci. Uya kudinga isibane esomeleleyo iiyure eziyi-10-12 ngosuku, ukuqinisekisa ukukhula kwezityalo ngamandla.
I-Scalars ngabahlobo abalungileyo ukuba bahlale kunye nezinye iintloboukuba nje ziphantse zazilingana. Ukuba uzibeka kunye neentlanzi ezincinci, banokuza bazithathe njengokutya kwabo. Ukuphucula ukuhlalisana kungcono ukuba bahlala ngokwamaqela abantu abaliqela, ukunqanda ukuba bangangumhlaba kwaye babe ndlongondlongo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Ukunyamekela kweentlanzi
UDaniel roberto mayo alarcon sitsho
Kutheni le nto isikali samadoda sinokuba ndlongondlongo kwabasetyhini?
Phendula kuDaniel roberto mayo alarcon
Ziqhelekile ukuba ndlongondlongo kuba zinendawo enkulu xa zizala kwaye inkunzi ingahlasela iimazi xa zibona isoyikiso kulutsha okanye xa zisusa iintlanzi kwitanki leentlanzi.